Banethemba kubalandeli babo | Isolezwe
Banethemba kubalandeli babo
intandokazi / 9 November 2018, 11:55am / NOKUBONGWA PHENYANE
OSAZIWAYO baKwaZulu-Natal abaqokwe emcimbini amaDStv Mzansi Viewers Choice Awards, bathi abangabazi ukuthi abalandeli babo benze konke okusemandleni ukuthi babuye nezindondo abaqokelwe kuzona kulo mcimbi.
Lo mcimbi ozobanjwa okwesibili kulo nyaka, uzoba seSandton Convention Centre, eGoli ngoNovemba 24.
Umcimbi walo nyaka uzobe uphethwe intokazi uBonang Matheba.
Ukuvotela osaziwayo obathandayo kuvalwa ngoMgqibelo.
Umsakazi woKhozi FM, uDudu Khoza oqokwe emkhakheni weRadio Personality of the Year, uthe angajabula ukuthi ayithole le ndondo njengoba ukuqokwa kwakhe kulo mcimbi kungenziwanga uyena kodwa yibona abalaleli. “Abaqhubeke abalaleli bavote njengoba sekuzovalwa nje.”UZipho “Goldmax” Mthembu oyilungu leDistruction Boyz, iqembu eliqokwe emikhakheni emithathu kulo mcimbi uthe, banethemba elikhulu lokuthi bazobuya nazo zonke izindondo abaqokelwe kuzo kulo mcimbi.
“Imindeni, abangani nezihlobo zethu ziyasikhombisa ukuthi ziyasivotela kulo mcimbi, ngakho siyathemba ukuthi lesi kuzoba isikhathi sethu kulo mcimbi.”
U-DJ Tira uthe uyabonga kubantu abasaqhubeka nokumvotela njengoba eqokwe emkhakheni weFavourite DJ.
“Noma yini ingenzeka kulo mcimbi, abantu abaqhubeke nokungivotela njengoba ngoLwesihlanu lolu esiya kulo ngizokhipha ingoma entsha ethi Happy Day nengisebenze kuyo nabantu okukhona kubo uPrince Bulo noZanda Zakuza,” kuchaza yena.
Umsakazi woKhozi FM uSelby Mkhize uthe njengoba sekusele izinsuku ezintathu nje kuvalwe abantu abavote sengathi abakaze bavota phambilini.
Abanye osaziwayo bakulesi sifundazwe abaqokiwe kulo mcimbi khona kubo noFelix Hlophe, Nomzamo Mbatha, Khuzani noShekhinah.